Faah faahin:- Weerar ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Istanbuul (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Weerar ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Istanbuul (SAWIRO)
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa nin hubeysan oo ku labisan dharka odayga Chrismass-ka “Santa Claus” oo weerar xoogan ku qaaday goob lagu caweeyo oo ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyadoo weerarkaasi lagu dilay 39 qof, halka 69 kalena lagu dhaawacay.
Ninka weerarka qaaday oo lagu tilmaamay argagixiso ayaa weli ciidamadu ku raad joogaan, iyadoo aan la ogeyn in dabley kale ku lug leeyihiin weerarkaasi, wuxuuna wasiirka arrimaha gudaha Turkiga Suleyman Soylu sheegay in weli lagu raad-joogo sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa gacan ku dhiiglahaas.
Weerarkaasi ayaa la sheegayaa in lagu qaaday xarunta Reina ee deganka Ortakoy, halkaas oo ay degan yihiin dadka tujaarta ah, waxaa dadka la dilay ka mid ah 16 qof oo ajnabi ah.
Dad goob-joogayaal ah ayaa sheegay in ninkaasi hubeysan uu gudaha u galay goobta lagu caweeyo, isagoo ku lebisnaa dharka Odayga Chrismass-ka ee “Santa Claus”, kadibna uu si arxan darro ah rasaas ugu furay dadkii meesha ku jiray.
Dhinaca kale, ciidamada sida gaarka ah u tababaran ayaa goobta uu dilka ka dhacay baaritaan ku sameeynaya, iyadoo gawaarida gurmadka deg-dega ah ay weli ku sugan yihiin goobta uu weerarka ka dhacay.
Ugu dambeyntii, goobta uu weerarka ka dhacay ayaa la sheegayaa inay ku sugnaayeen in ka badan 700 boqol oo qof, kuwaas oo ku caweynayay goobtaasi, waxaana la sheegayaa in qaar ka mid ah dadkaasi ay isku tuureen biyaha badda balse markii dambe lasoo bad-baadiyay.